Vaping Marijuana: 5 Talooyin Wanaagsan Si Aad Uga Faa'idaysato • Daroogada Inc.eu
Vaping marijuana: 5 talooyin fiican si aad uga faa'iidaysato
Marijuana waa walax muddo badan la kulmaysay muran badan. Sababo kala duwan awgood, dawladaha adduunku waxay u diideen muwaadiniintooda inay soo saaraan oo isticmaalaan geedahan dawada ah. Nasiib wanaag way bilaabeen si looga noqdo xayiraadan Maraykanka, iyo kuwo kale. Marijuana adhiga ayaa marba marka ka dambaysa caan noqonaysa.
1 Fahmaan nooca aad u baahan tahay si aad u nuugto marijuana
1.1 Qalimaan Vape
1.2 Vapes -ka dhirta qallalan
1.3 Qaabka miiska uumi bixiyeyaasha
2 Dooro wax soo saarka vape saxda ah
3 Isticmaal sahay dheeraad ah si aad u badbaadiso waqtiga
3.2 Suufka suufka iyo qalabka kale ee nadiifinta
4 Fahmaan farsamada saxda ah
5 si tartiib ah u qaado
6 Ugu dambayntii uumiga mariidka
In kasta oo xayiraadda la qaaday, haddana dad badan ayaa weli fikrad khaldan ka qaba geedahaas. Marka hore, waxay wali rumaysan yihiin in cabista marijuana ay leedahay cawaaqib badan. Taasi waxay tidhi, soo -saareyaashu waxay la yimaadeen hab cusub oo dadku u cunaan marijuana: uumiga.
Waxay sidoo kale la yimaadeen arrintan si loogu gudbayo u -fududeynta dadka qaba a balwadda sigaarka iyo balwadaha mukhaadaraadka sida nikotiinta iyo tubaakada. Haddii aad rabto inaad ogaato sida marijuana vape u shaqeyso iyo sida loo bilaabo, nasiib baad leedahay. Maqaalkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad iftiimiso shan talooyin oo aad u fiican si aad uga faa'ideysato marijuana. Waxaad u adeegsan kartaa talooyinkan bilowga ah ama xitaa ruug -caddaagii uumiga.
Fahmaan nooca aad u baahan tahay si aad u nuugto marijuana
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad fahanto sida loo doorto xirmada vape -gaaga si aad ugu raaxaysato khibradaada uumiga. Sababta ugu weyn ee aysan dadku ugu riyaaqin uumiga markii ugu horeysay ee ay isku dayaan waa inaysan fahmin noocyada kala duwan ee uumiga loo isticmaalo ujeedooyin kala duwan. Waxaa jira saddex nooc oo uumi -baxyo ah, kuwaas oo kala ah:
Qalimaanta Vape shaki la'aan waa qaabka ugu badan ee uumiga. Haddii aad aragtay koox saaxiibo ah vape, waxaa laga yaabaa inaad aragtay qalimaan vape. Iyagu waa foomka la qaadan karo ee uumiga, oo qalimaanta ka dhigaya kan ugu fiican uumiga socdaalka.
Waxay badanaa isticmaalaan saliidaha vape halkii ay ka isticmaali lahaayeen xashiishka qalalan ee qallajiya uumiga geedaha iyo uumiga miiska oo badan. Intaa waxaa dheer, ma soo saarto uumi aad u badan marka la barbar dhigo uumiga kale, taas oo ka dhigaysa kuwo ay bulshadu aqbali karto.
Vapes -ka dhirta qallalan
Uumiga dhirta qallalan waa uumiga meesha aad ku isticmaasho marijuana ceeriin, qalalan halkii aad ka isticmaali lahayd saliid vape. Badankoodu waa yar yihiin waxayna ku shaqaysaa kulaylinta xashiishadda qol yar. Qolkani wuxuu soo saaraa uumiga, tanina waa waxa aad neefsato.
Qaabka miiska uumi bixiyeyaasha
Uumiga miiska ayaa ah kan ugu weyn noocyada vape -ga waxaana ugu fiican dadka jecel inay ku cabbaan hal meel. Maadaama uusan vape -ku lahayn nooc batari ah, waxaad u baahan tahay inaad ku xirato vape -kan koronto si uu u shaqeeyo.
Dooro wax soo saarka vape saxda ah
Ka dib markii aad dooratay nooca gaarka ah ee vape -ka aad rabto, waxa ku xiga ee aad u baahan tahay inaad samayso ayaa ah soo -qaadista badeecada vape ee saxda ah. Alaabta aad doorato ayaa go'aamin doonta faa'iidooyinka aad ka hesho uumiga. Labada nooc ee ugu waaweyn ee alaabada uumiga ah waa saliid vape ama xashiishad la qalajiyey.
Saliidaha Vape waxay ku yimaadaan dhadhan kala duwan, kuwaas oo kugu sii hayn kara inaad uumi baxdo muddo dheer. Si kastaba ha noqotee, haddii aad raadineyso waayo -aragnimo dabiici ah oo ka sii badan, waxaa ugu wanaagsan inaad tijaabiso xashiishadda la qalajiyey.
Isticmaal sahay dheeraad ah si aad u badbaadiso waqtiga
Markay dadku rabaan inay sigaar cabbaan, badiyaa waxay lumiyaan waqtiga badhkood raadinta sahayda uumiga. Taasi waxay tidhi, waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad haysato, oo ay ka mid yihiin:
Griinleydu waa aalado yaryar oo aad u baahan tahay. Waxaa loo isticmaalaa in lagu burburiyo haramaha loona diyaariyo sigaar cabista ama adhiga. Hubaal, waxaad ku shiidi kartaa cawskaaga adoo adeegsanaya hababka gacanta, laakiin si dhakhso ah ayey u noqon doontaa mid qas badan oo asal ahaan waqti lumis aan loo baahnayn.
Suufka suufka iyo qalabka kale ee nadiifinta
Suufka suufku waa qalab aad u isticmaasho si aad u nadiifiso uumiga. Sababtoo ah xinjirooyinka ay ka tagaan casiirka vape, waxay si fudud u wasakhayn karaan qalinkaaga vape. Nasiib wanaag, waxaad ku nadiifin kartaa suufka iyo qalabka kale ee nadiifinta. Aaladaha kale ee nadiifinta qaarkood waxaa ka mid ah khamriga iyo buraashka iyo gargaarka kicinta.
Fahmaan farsamada saxda ah
Rumayso ama ha rumaysan, waxaa jira farsamo gaar ah oo khubarada iyo ruug -caddayaasha uumiga ay adeegsadaan si ay u kordhiyaan khibradooda uumiga. Waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa ku neefsashada uumiga afkaaga ku jira. Ka hor intaadan neefsan, hubso in vape -kuagu gaaray heerkulkii loo baahnaa. Haddii kale ma heli doontid sida ugu fiican ee khibradaada uumiga. Ku neefso sambabbadaada oo neefso kaliya ka dib markaad sambabadaada ka buuxiso uumiga oo aad haysato ilaa laba ilaa saddex ilbidhiqsi.
si tartiib ah u qaado
Hal khalad oo dad badan oo ku cusubi sameeyaan ayaa ah in la isku dayo in si aad iyo aad u dhakhso badan loo neefsado. Haddii aad ku cusub tahay uumiga, waxa ugu horreeya ee la sameeyo waa inaad is dejiso oo aad dareento raaxo. Waa wax la fahmi karo in la neerfayo, laakiin haddii aad aad u neefsato neerfaha awgeed, waxaad bilaabi kartaa qufac. Ugu dambayn, isku day in aad biyo ka hesho inta u dhaxaysa fadhiyada vape -gaaga waayo -aragnimada ugu fiican.
Ugu dambayntii uumiga mariidka
Vaping waa waxqabad fantastik ah oo dad badan ay tahay inay tixgeliyaan isku dayga. Haddii aad ku cusub tahay uumiga ama raadinta siyaabo aad ku weyneyso khibradaada uumiga, waxaan rajaynaynaa in maqaalkani kaa caawiyay sharraxaadda sida ugu wanaagsan ee aad uga faa'iidaysan karto fadhiyada uumigaaga.
Borstkanker: een ziekte die nog steeds veel vrouwen treft. Veel van hen gebruiken cannabisproducten om pijn…
Maalinta kali 2020: hage haddii aad sigaar cabto oo aad rabto inaad bilowdo shukaansi
Marka la eego maalinta kali ah: ka waran hadaad sigaar cabto oo aad rabto ...
Switzerland waxay sharciyeysay isticmaalka xashiishadda madaddaalada iyo caafimaadka
Sida filimka oo kale Wareeg kale (Cadaadis): Maxaa dhab ahaan dhacaya marka aad khamriga microdose cabto?
Microdosing LSD iyo Cannabis: Isbeddellada iyo Mustaqbalka